ISupergeo ingena kumanyano kunye neGPS PL ukubonelela ngezisombululo ze-Turnkey ze-iOS-Geofumadas
Epreli, 2014 GPS / Izixhobo, SuperGIS
SuperGeo Technologies wamemezela Intsebenziswano umdla ne GPS PL, imodeli ukusebenza esitsalela ingqwalasela kunye yonke imihla ezikhuthazwa ziinkampani kunokuba kukhuphisana kwimarike, intsebenziswano usenzele ulwazi lwakho olungcono.
Ezi nkampani zimbini zibonelela ngezisombululo ze-GIS kwizixhobo eziphathwayo, ngelixa i-GPS.L kwimarike yasePoland iye yaphuhliswa kulungiselelo lweenkonzo zonxibelelwano, uqeqesho, inkxaso yezobuchwephesha kunye noluhlu lweemveliso zekhompyutha. Nangona ububanzi bayo budlula ngaphaya komda wayo, ukuya kumazwe angabamelwane kumantla eYurophu.
Okwangoku, iSuperGeo iphuhlise usetyenziso lwe-GIS kwinqanaba lesoftware. Ityala leSuperSurv alikho kuphela kwizixhobo ze-Android kodwa ngoku nakwi-iOS. Ayizizo ezokuqala, ukhuphiswano luqinile ngoku ukuba izixhobo eziphathwayo zihamba kakhulu kwifashoni, unxibelelwano lusebenza ngakumbi kwaye iinkonzo zejografi ezikwi-Intanethi zinemigangatho ezinzileyo. Oku kuthetha ukuba iitafile zithathwa njengesixhobo esisebenzayo kungekuphela nje sokufumana idatha, kodwa kunye nokufaka ulwazi kwitheyibhile ebaleni, ukuzoba ngokuchanekileyo kwiscreen sokuchukumisa, ukwenza ulondolozo lweepasela kwidatha ehambelanayo kwiseva esembindini, phakathi kwezinye izinto.
Inyaniso kukuba abasebenzisi bafana, kokubili isofthiwe ye-geolocation kunye ne-hardware apho isenzo senziwa khona.
Indibaniselwano yezi nkampani zimbini ifuna isisombululo se "turnkey" esaziwa njenge-3R SuperSurv, esiqale sijolise kubasebenzisi basePoland naseYurophu. Kuya kuba mnandi ukubona ifuthe elinokuba nalo kubasebenzisi, besazi ukuba iGPS.PL sele ikumhlaba wezixhobo ze-geolocation phantse amashumi amabini eminyaka kunye nokusetyenziswa kolwandle, ubuchwephesha, ezolimo, amahlathi, ezendalo, ezokhuseleko kunye neendawo zokufaka idatha ngokubanzi. intsimi.
Nangona luguqulelo SuperSurv lulungiselelwe ukuba kwimeko, kukho ixabiso kule mava, kuba ukuthengisa ngaphaya elucwecweni kunye software efakiweyo, izixhobo GPS.PL bayaxatyiswa abathengi ngokuba amaqela imeko ezimbi.
Akufanele ukuba kufane nokuya kwivenkile ye-Apple uyokuthenga ithebhulethi, uthenge iSuperSurv kwiZatocaConnect, uyifake kwaye uyisebenzise Apha sithetha ngenye into ... abahlobo bethu basePoland baya kuba nakho ukuyitsho kwiinyanga ezimbalwa.
Olunye ulwazi malunga I-SuperSurv: http://www.supergeotek.com/ImvelisoPage_SuperSurv.aspx
Bona ngaphezulu malunga ne-3R-SuperSurv IGPS.PL: http://www.gps.pl/3r
Post edlulileyo«Ngaphambilini MDT, isisombululo esipheleleyo seProjecting and Engineering
Post Next Iimpawu zeteknoloji kwizibonelelo zophuhliso zendawo yaseLatin AmericaOkulandelayo »